Mijoro miaraka amin'ireo mpampianatra Afghan ny Mpanabe Fandriampahalemana eran-tany - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana
Oktobra 6, 2021 Fanairana, Vaovao sy hevi-dehibe 1
Mpampianatra: Agents of Human and Development Social
“Ny fanabeazana no vato manorina voalohany amin'ny fiaraha-monina.” - ONU, Fanabeazana ho an'ny rehetra
“… Hanamafy ny finoana ny zon'olombelona fototra…. Ny zon'ny lehilahy sy ny vehivavy… ”- Sata an'ny Firenena Mikambana
“Ny olon-drehetra dia manan-jo hanana fanabeazana.” - Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona
“… Miantoka fanabeazana sahaza fitoviana mendrika ho an'ny rehetra [ao anatin'izany, fampianarana ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa ho an'ny zazalahy sy zazavavy]” - Firenena Mikambana, Tanjona fampandrosoana maharitra
Nandritra ny taonjato maro, ny fanabeazana dia nekena ho lalàm-pananganana ho an'ny olombelona. Ny fiaraha-monina miavaka amin'ny fandraisan'anjaran'ny vahoaka dia mitaky ny maha-zava-dehibe azy amin'ny fitondrana tsara. Hatramin'ny nananganana ny Firenena Mikambana dia lasa a sine qua non ny fampandrosoana ara-tsosialy. Ireo fotopoto-pitsipika fototra ireo, izay fintinina ao amin'ireo fehezanteny etsy ambony avy amin'ny fenitry ny Firenena Mikambana ary nohamafisin'ny fiarahamonim-pirenena iraisampirenena, dia tandindomin-doza ankehitriny eo ambanin'ny fitondran'ny Taliban fundamentalist-misogynist an'ny Taliban.
Ny fanabeazana manara-penitra, ny fiomanana amin'ny fiainana feno sy ny zom-pirenena tompon'andraikitra amin'ny fiaraha-monina nahaterahan'ny olona iray ary ny fandraisana anjara amin'ny vondrom-piarahamonina eran'izao tontolo izao sy haingana dia voafitaky ny fandikana ny finoana silamo tsy misy fotony sy tsy orthodoksa an'ny Taliban ho fandaharam-pianarana voalohan'ny sekoly rehetra. Ny Koran dia tsy manome lanja ambany kokoa ny vehivavy ho an'ny vehivavy.
Ny fameperana henjana amin'ny fanabeazana ny zazavavy sy ny tovovavy amin'ny fanakanana ny fianarany amin'ny ambaratonga faharoa sy ny oniversite dia manitsakitsaka ny zon'izy ireo hanana fanabeazana kalitao, mandà ny fiarahamonina mety ho antsasaky ny mponina, ary manakana ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-politika , ilaina amin'ny ho avy mety ho an'i Afghanistan.
Ireo mpandray anjara sy mpanaraka ny Fanentanana momba ny fandriam-pahalemana momba ny fandriam-pahalemana dia nanjary nahafantatra ny filan'ny fampianarana zazavavy sy ny fahamafisan'ireo mpampianatra Afgana amin'ny fanomezana izany amin'ny alàlan'ny tatitra avy amin'i Sakena Yacoobi, Mpanorina ny Ivon-toeram-pianarana Afgana. Ohatra iray miharihary indrindra amin'ny fikirizanana sy ny fanoloran-tena ho an'ny mpampianatra Afgana hita ao amin'ny tatitra be mpampiasa valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety, mitaky ny fandoavana ny karaman'ny mpampianatra.
Ny sakana miharihary sy mangirifiry indrindra amin'ny fanabeazana Afghana amin'izao fotoana izao dia ny toe-javatra misy an'ireo mpampianatra be fanoloran-tena sy be herim-po. Betsaka no nampianatra nefa tsy nisy karama nandritra ny volana maro, tsy isalasalana fa rehefa nanao fanomezana sosialy hafa ny mpampianatra dia efa nataony foana. Betsaka amin'izy ireo, na lahy na vavy, no hany manome ny ankohonany.
Amin'izao fotoana izao, ny hetsika tokana miavaka indrindra tokony hatao mba hahasoa ireo mpanabe ireo, ny fianakaviany ary ny fireneny dia ny hamindran'ny Banky Iraisam-pirenena ny sasany amin'ireo fanampiana mahaolona izay afaka mandoa ny karamany.
Ny taratasy namboarina sy naparitak'i Code Pink (namboarina etsy ambany sy azo anaovana sonia eto) dia atolotra ny filoha Biden, satria i Etazonia dia mitondra lanja bebe kokoa amin'ny Banky noho ny firenena hafa. Entanina ny mpamaky mba hanao sonia ity taratasy ity, ary ireo izay te handray andraikitra bebe kokoa dia afaka miresaka mivantana any amin'ny Banky Iraisam-pirenena sy amin'ny lehiben'ny fanjakana ary ny solontenan'ny Firenena Mikambana, miantso ny fanohanany an'ity hetsika ity, ny vatan'izao tontolo izao, ny masoivohony rehetra ary ny mpikambana rehetra ao amin'ny fiombonambe iraisam-pirenena mba hitaky ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena ho toy ny fepetra mialoha ho an'ny fifandraisan'ny Taliban rehetra. (-BAR, 10/5/21)
Lazao amin'ny fitondrana Biden sy ny Banky Iraisampirenena hamoaka vola handoavana mpampianatra Afghan sy mpiasan'ny fahasalamana
Ny vehivavy Afgana dia nanao antso maika momba ny tsy fandoavana ny karama ho an'ireo vehivavy mpampianatra Afghanistan sy mpiasan'ny fahasalamana. Ampio ny anaranao amin'ny fanangonan-tsonia miantso ny Biden Administration, ny Banky Iraisam-pirenena, ary ny mpikambana lehibe ao amin'ny kaongresy hamoaka ny vola Afgana handoavana ny karaman'ny mpampianatra sy ny mpiasan'ny fahasalamana.
sonia eto ny taratasy
Ry filoha Biden malala, ny Banky Iraisam-pirenena ary ireo mpikambana lehibe ao amin'ny kaongresy (jereo eto ambany ho an'ireo mpikambana manokana ao amin'ny kaongresy),
Raha ny filazan'ny vehivavy any Afghanistan dia mamela ny ankizivavy hanatrika sekoly ambaratonga voalohany ny Taliban (kilasy 1-6). Mbola tsy nosokafan-dry zareo ny zazavavy kilasy 7-12 fa nianiana hanao izany izy ireo. Na izany aza, misy sakana lehibe: ny tsy fandoavana ny karaman'ny mpampianatra. Misy mpampianatra vehivavy maherin'ny 120,000 any amin'ny sekolim-panjakana manerana ny firenena, ary manodidina ny antsasak'izy ireo no loharanom-bola ho an'ny fianakavian'izy ireo. Tena sarotra, eny fa tsy azo atao mihitsy aza ny mangataka amin'ireto mpampianatra ireto hanohy hampianatra tsy misy karama.
Alefaso azafady ny vola Afgana handoavana ny karaman'ny mpampianatra Afghan.
Ny krizy mitovy amin'izany dia ny vehivavy mpiasan'ny fahasalamana. Misy mpiasan'ny vehivavy 13,000 mahery any Afghanistan, ao anatin'izany ny dokotera, ny mpampivelona, ​​ny mpitsabo mpanampy, ny mpanao vaksiny ary ny mpiasa vehivavy hafa. Ny ankamaroan'izy ireo dia nokaramaina tamin'ny alàlan'ny Banky Iraisam-pirenena tamin'ny alàlan'ny Tahirim-bolan'ny Trust Reconstruction Afghanistan (ARTF), saingy nanomboka ny volana Jona dia nijanona ny famatsiam-bola. Mandritra izany fotoana izany, ny rafi-pahasalamana dia eo an-tsisin'ny fianjerany. Nisy ny fitomboan'ny trangana kitrotro sy fivalanana; ny famerenana indray ny lefakozatra dia zava-doza lehibe indrindra; efa ho ny antsasaky ny zaza no tsy ampy sakafo; hopitaly COVID efa ho 1 amin'ny 4 no nakatona ary vaksinin'ny COVID2 19 tapitrisa no mbola tsy ampiasaina amin'ny tsy fahampian'ny mpiasa hitantana azy ireo.
Azafady mba esory ny vola Afgana handoavana mpiasa sy mpampianatra vehivavy mpitsabo. Ity vola ity dia mety ho avy amin'ny Tahirim-bolan'ny Banky Iraisam-pirenena Afghan Trust na $ 9.4 miliara dolara naparitaka tao amin'ny banky amerikana.
* Ho fanampin'ny fifanarahana nifanaovana tamin'ny filoha Biden, miantso ireto mpikambana lehibe ao amin'ny Kaongresy ireto izahay ho an'ity olana ity:
Komity misahana ny asa ara-bola any an-trano:
Ny filoha lefitra Maxine Waters, ny mpikambana laharana Patrick McHenry, ary ny filoha lefitra Jake Auchincloss;
Komitin'ny serivisy ara-bola amin'ny trano momba ny varotra iraisam-pirenena, ny fanao ary ny fifaninanana eran-tany:
Ny filoha Thomas Carper ary ny mpikambana ao amin'ny John Cornyn;
Komity momba ny vola amin'ny senatera:
Ny filoha Ron Wyden sy ny mpikambana ao amin'ny laharana Mike Crapo;
Komity Senat momba ny banky, ny trano ary ny fampandrosoana an-tanàn-dehibe:
Ny filoha Sherrod Brown ary ny mpikambana ao amin'ny filoham-pirenena Patrick Toomey;
Komitin'ny Antenimieran-doholona momba ny banky, ny trano fonenana ary ny kaomisiona momba ny fampandrosoana an-tanàn-dehibe momba ny fiarovana sy ny varotra iraisam-pirenena ary ny vola.
# Banky Iraisam-pirenena
Fandaharam-pampianarana momba ny fandriam-pahalemana ho an'ny mpianatra Afghan
Enga anie 25, 2016 Tatitra momba ny hetsika, Policy 1
Ampianaro ny fandaharam-pianarana fanabeazana ho an'ny fandriam-pahalemana ho an'ny ankizy Afghana no modely voalohany an-tsekoly izay mikendry manokana ireo mpianatra amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy any amin'ny lisea, izay mamporisika azy ireo handà ny herisetra sy ny karazana fihetsika mahery setra nefa eo am-pandraisana ny fitsipiky ny fiainana milamina, ny fanajana ny fahasamihafana. , ary fiaraha-miasa.
Nampidirina am-piandohana tamin'ny taona 2003 tany amina sekoly telo, ilay modely dia niely tamin'ny sekoly 62 any amin'ny faritany dimy, nahatratra zazalahy sy zazavavy 86,000 2012 mahery. Vokatr'ireo sekoly ireo tao anatin'ny telo taona lasa dia nampiseho fihenam-bidy lehibe, fanatsarana tsy tapaka ny kilasy sy ny fitondran-tsekoly, ary ny fihenan'ny fampiasan'ny mpampianatra ny sazy kaporaly. Tamin'ny taona XNUMX, nanaiky ny fahafahany misy akony amin'ny mpianatra an-tapitrisany, ny Minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena ao Afghanistan dia nanohana ny fandraisan'anjaran'ny HTAC hanitatra any amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena. [tohizo ny famakiana…]
Septambra 3, 2021 Fanairana, Vaovao sy hevi-dehibe 0
Fikambanana ho an'ny fandrindrana ny fanampiana maha-olona any Afghanistan dia mitady mpanazatra / mpanolotsaina momba ny fandriam-pahalemana
Desambra 12, 2018 Jobs 0
OCHR dia mitady mpanazatra nasionaly mahay mba hitarika fiofanana ho an'ireo olona tafaverina sy IDP amin'ny fampiroboroboana ny kolontsain'ny fandriam-pahalemana sy ny tsy herisetra ao amin'ny faritanin'i Nangarhar sy Kunar. Fe-potoana fampiharana: 19 Desambra. [tohizo ny famakiana…]
1 Verindrohy (trackback) / Pingback
Mosarena ny Taliban - sa ny vahoaka Afgana? - Fanentanana manerantany ho an'ny fandriam-pahalemana